Putin and Xi Oversee Launch Of Landmark Russian Gas Pipeline To China | Myanmar Business Today
Home Business International Putin and Xi Oversee Launch Of Landmark Russian Gas Pipeline To China
Vladimir Soldatkin (Reuters)
Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping last week oversaw the launch ofalandmark pipeline that will transport natural gas from Siberia to northeast China, an economic and political boost to ties between Moscow and Beijing.
The move cements China’s spot as Russia’s top export market and gives Russiaapotentially enormous new market outside Europe. It also comes as Moscow is hoping to launch two other major energy projects -the Nord Steam2undersea Baltic gas pipeline to Germany and the TurkStream pipeline to Turkey and southern Europe.
ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin နှင့် တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့သည် ဆီဘားရီးယားမှာ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းသို့ ဆက်သွယ်မည့် ပိုက်လိုင်းဖွင့်လှစ်သည့် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
Power of Siberia ဟုခေါ်သော ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဓာတ်ငွေ့များ စတင်ပို့ဆောင်ခြင်းမှာ ခရိုင်းမိးယားကို ယူကရိန်းမှ ခွဲထုတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နိုင်ငံများက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ၏ ထိခိုက်မှု ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် အရှေ့နိုင်ငံများဘက်သို့ လမ်းဖွင့်လာသည့် ရုရှား၏ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ တင်ပို့မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရုရှား၏ ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွင် နေရာတစ်ခုရလာခဲ့ပြီး ရုရှားအတွက်လည်း ဥရောပအပြင်တွင် အကြီးဆုံး‌ဈေးကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ရုရှားအနေဖြင့် စွမ်းအင်စီမံကိန်းကြီးနှစ်ကိုလည်း စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဥ်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ပိုက်လိုင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ ရှည်လျားသော Power of Siberia ပိုက်လိုင်းသည် Chayandinskoye နှင့် Kovyka လုပ်ကွက်များမှ ဓာတ်ငွေ့များကို သယ်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းစီမံကိန်းသည့် နှစ်သုံးဆယ် စီမံကိန်းဖြစ်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘီလီယံ ဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။
“ဒါဟာ ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ဈေးကွက်အတွက်သာမက ကျွန်တော်တို့ ရုရှားနဲ့ တရုတ်တို့အတွက် သမိုင်းဝင် အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပူတင်က ပြောသည်။
“ဒီခြေလှမ်းဟာ ရုရှား-တရုတ် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းမှုကို နောက်တစ်ဆင့် မြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီး တရုတ်ခေါင်းဆောင် Xi Jinping နဲ့အတူ ချမှတ်ထားတဲ့ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံ ရောက်ရှိရေးဆိုတဲ့ အနေအထားကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ နီးစပ်လာပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပိုက်လိုင်းအသစ်သည် ရုရှားနယ်စပ် Heilongjiang မှ စတင်ပြီး Jilin နှင့် Liaoning ထိ သွယ်တန်းထားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းပိုင်လိုင်းမှ ဓာတ်ငွေ့သယ်ပို့မှုမှာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ကုဗမီတာ ၃၈ ဘီလီယံအထိရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံပြီးလျှင် ရုရှား၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး ဈေးကွက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဓာတ်ငွေ့ ၅၈ ဒသမ ၅၀ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ တင်သွင်းဝယ်ယူခဲ့သည်။
SOURCEVladimir Soldatkin (Reuters)
Previous articleHuawei Hits Back at FCC With Legal Challenge
Next articleUnicredit Says To Buy Back Stock This Year, Cut9Percent of Staff